Hcebharr — Steemkr
htotepayyninengantawsammat Donald Trump eat muuward taanpyan hcaittautk aamhusaunganay hpyint liin tait u hkyinn hcebharr " m sayypanyarahkinelonesaw aakyaunggpyahkyet" shi kwayarngya ngw ngya hkone naypartaal . " kyanawthoet k myaha sayypanyarahkinelonesaw aakyaunggpyahkyet shiyonekyipartaal - kyarr dysphoria tait u rawgar lakhkanartwaykoaaparaawain -
tracqualursi, CNN shoet 1542 garainnnaithcantawhkyane (2342 HKT) epyel 5, 2018 noutsonerayysarrhkyane WH aamyarrsone liin puggolmyarr patepain aamayrikaanpyihtaunghcu shi sararwaanmyarreat fThe aakyeesone aasainnaahpwal maatl
" အဲဒီစောဒကတက်သည် အိမ်ဖြူတော်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအမှုဆောင်များထံမှအများဆုံးလိင်လူတွေကိုပိတ်ပင်ဖို့မူဝါဒကကြေငြာလိုက်သည်
1542 ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် (2342 HKT) ဧပြီလ 5, 2018 နောက်ဆုံးရေးသားချိန် WH အများဆုံးလိင်ပုဂ္ဂိုလ်များပိတ်ပင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဆရာဝန်များ၏ fThe အကြီးဆုံးအသင်းအဖွဲ့မတ်လထုတ်ပေးနိုင်ငံတော်သမ္မတ Donald Trump ၏မူဝါဒတန်ပြန်စစ်တပ်ကအမှုဆောင်အနေဖြင့်လိင်တစ်ဦးချင်းစီဘား "မဆေးပညာအခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်" ရှိကွောငျးငွငျးခုံနေပါတယ်။ "
ကျနော်တို့ကမျှဆေးပညာအခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ရှိယုံကြည်ပါတယ် - ကျား dysphoria တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုအပါအဝင် - စစ်မှုထမ်းခြင်းမှလိင်တစ်ဦးချင်းစီဖယ်ထုတ်နိုင်ဖို့ပါ" ဟုအမေရိကန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှအင်္ဂါနေ့ရက်စွဲပါကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးဂျိမ်းစ်မက်တီမှစာတစ်စောင်၌ရေးသားထားသည်။ "လိင်တစ်ဦးချင်းစီတာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်ဂုဏ်အသရေနှင့်အတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုအစေခံရန်ဆက်လက်ကျနော်တို့သူတို့အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဆက်လက်ခွင့်ပြုသင့်ယုံကြည်ပြီ။ " AMA CEO ဖြစ်သူဂျိမ်းစ် Madara ကကလက်မှတ်ရေးထိုးအဆိုပါစာသည်, နိုင်ငံတော်သမ္မတမှမက်တီ '' အကြံပြုချက်များ "mischaracterized နှင့်လိင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၏ထိရောက်မှုအပေါ် peer-ပြန်လည်သုံးသပ်သုတေသန၏ကျယ်ပြန့်ခန္ဓာကိုယ်ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
hcaitmhuhtam hkyinn mha liin tait u hkyinn hce hpaal htote ninehphoet par" hu aamayrikaan sayybhaat sinerar lotengaannshinmyarr aasainnmha aain gar nae raathcwalpar karkwalrayy aatwinrayymhauu gyaaimit maat te mha hcartaithcaung rayysarrhtarrsai . " liin tait u hkyinn hce tarwaanhtamsaung nhaint gunas ray nhang aatuu, kyawantawthoetrae tinepyikoahcay hkan raan saatlaat kyanawthoet suuthoet aelldelo lotehkyinnaarr saatlaat hkwin pyu saint yonekyi pye . " AMA CEO hpyitsuugyaaimit Madara k k laatmhaatrayyhtoe aasopar hcar sai, ninengantawsammatamha maatte '' aakyaanpyuhkyetmyarr "mischaracterized nhaint liin kyannmarrayyhcaungshoutmhu eat htiroutmhuaapaw peer- pyanlaisonesaut sutaysan eat kyaal pya ant hkandharko ngyinnpaal hkaesai . " aellde hcawdak taatsai aainhpyauutaw hcaitbhaatsinerar aamhusaung myarrhtanmha aamyarrsone liin luutwayko patepain hphoet muuward k kyay ngyaar litesai
artzone67 · 4년 전
wafrica66 · 4년 전